वैशाख २७ को बीजगणित : केपी ओलीका ४ दाउ | Ratopati
personअरुण बराल exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख २१, २०७८ chat_bubble_outline3
​​प्रधानमन्त्रीको नियत जेसुकै होस्, संसदीय गणितका सूत्र एवं मान्यताहरुले त्यसलाई ‘सपोर्ट’ गर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानका धारा–उपधाराहरुले साथ दिनैपर्ने हुन्छ । संसदीय गणित र संविधानका सूत्रहरूले साथ नदिने खेल खेलियो भने त्यो पुस ५ को असंवैधानिक कदमजस्तै आत्मघाती गोल सावित हुन सक्छ । राजनीतिशास्त्रले भनेकै छ, राजनीति खेलको नियमअनुसार खेलिनुपर्छ ।
तर, यसमा दुईवटा अवरोधक छन् : बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको बताउँदै आएको छ । त्यो सही ठहरियो र ओलीनिकट जसपाका सांसदहरुमाथि लुम्बिनीमा जस्तै फ्याट्ट कारवाही भयो भने ओली–गणित थप गिजोलिन सक्छ । अर्कोतर्फ, आफ्नै गोजीमा रहेको एमालेको १२१ भोट जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ अगावै माधव नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ, जुन हुन सकिरहेको छैन ।​
२. प्रधानमन्त्री खुस्केको केही घण्टामै फेरि नियुक्ति : प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै त्यसको केही घण्टाभित्रै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने ओलीको दोस्रो हिसाब–किताब रहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।​
​​धारा ७६ को पहेली !
​​ अविश्वास प्रस्तावको कुरा गर्दा काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरु एक स्टेप चुकिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि अब अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गर्नु भनेको ‘बिहेपछि पोतेको तयारी’ जस्तै हो ।
​​बरु, यसबीचमा सत्तापक्षबाट सांसदहरुको किनबेच र खरीद–बिक्री हुन थालेको सुनिएको छ । विपक्षी दलका नेताहरुले यही कुरामात्रै निगरानी गरे र पर्दाफास गर्न सके भने त्यो उनीहरुको नैतिक जित हुने थियो ।
​​वैशाख २७ मा विश्वासको मत पाइएन भन्दै संविधानको धारा ७६ का प्रावधानहरुलाई नाघेर प्रधानमन्त्री ओली फेरि संसद विघटनको बाटोमा गए भने यो विषय पुनः अदालतमा पुग्छ । र, इतिहासको पाङ्ग्रो फेरि पुस ५ बाटै घुम्न थाल्नेछ ।
May 5, 2021, 11:11 a.m. deepak amgain
बराल सरलाई केही अघि onlinekhabarले लखटेको थियो । समाचार कक्षमा आफ्नो लिँडेडिपी गर्ने उनले रातोपाटितिर पनि सोही सिद्धान्त अनुसरण गरेको जस्तो देखिन्छ, विगत एक महिनायता । सन्तुलित समाचार र विश्लेषण लेख्न सिक। होइन भने पुरानै नियति छिट्टै आउनेछ
May 5, 2021, 8:49 a.m. ईरानराई
हे अरुणजी, हा हा हा र फेरि पनि २ पटक हा हा (१) केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुभएको पार्टी नेकपा पनि फुटेको होइन, सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदिएको मात्र हो, (२) केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पार्टी एमाले फुटेको आजसम्म कतै सुनिएको छैन, भेटिएको छैन, (३) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ फागुन २३ को फैसलापछि २०७७ चैत २३ गतेभित्र प्रतिनिधि सभामा ‘विश्वासको मत’ लिनुपर्ने थियो भने हिजो मात्र ४९ सांसद (सभामुखसहित) रहेको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीलाई दिइएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय किन गर्नुपथ्र्यो ? सरासर अदालत गए भइहाल्थ्यो, (४) विचार र विश्लेषण आ–आफ्नै तर तथ्य र तथ्याङ्क बङ्ग्याउन बुद्धिमानी मानिन्न होला (५) लेख राम्रो तर एक पक्षीय ।
May 4, 2021, 9:56 p.m. Arjun Ghimire
राजनीति नाटकै त हो । नाटक गरेर २७ अगी नै माओादी र काङ्ग्रेस पार्टी एक भए भने ठूलो पार्टी हुन पनि सक्छ नि । यो विकल्प असम्भव भएर नलेखेको हो कि दिमाग नपुगेर हो ??